Avy amin'ny MySQL mankany Maria DB: Torolàlana momba ny fifindra-monina haingana ho an'i Debian | Avy amin'ny Linux
Rehefa misy vokatra miasa ary mahomby, ary loharano misokatra, latsaka am-pelatanan'ny orinasa iray izay tsy iza fa ny tanjona dia ny hitady vola bebe kokoa, dia mangovitra izao tontolo izao.
Efa nitranga tamin'io OpenOffice amin'izao fotoana izao dia anjaran'ny MySQL. Mitondra mankany Oracle ao ambadiky dia tsy misy mahalala izay mety hitranga ary tsara ny mahafantatra fa misy ny solony ary manokana ny tsara indrindra amin'ny rehetra Maria DB.
MariaDB Is a rafitra fitantanana database nalaina avy amin'ny MySQL amin'ny Fahazoan-dàlana GPL. Izy io dia novolavolain'i Michael Widenius (mpanorina ny MySQL) sy ny vondrom-piarahamonina mpamorona free software. Ampidiro roa milina fitehirizana vaovao, iray antsoina Aria -izay soloina tombony MyISAM- ary antso hafa XtraDB -manolo InnoDB. Izy io dia manana fampifanarahana avo lenta amin'ny MySQL satria mitovy ny baiko, ny interface, ny API ary ny tranomboky, ny tanjony dia ny hahafahana manova mpizara iray hafa mivantana.
Ka raha tsy misy resaka intsony dia ndao hojerentsika ny fomba hiaingana MySQL a Maria DB.
Zava-dehibe ny fahalalana fa raha hiasa 100% io dia tsy maintsy manana ny kinovan'ny MySQL (5.5) sy Maria DB (5.5) isika.
Mifindra monina avy ao amin'ny MySQL mankany Maria DB
Ity dingana ity dia tsy azo atao mafana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila mijanona vetivety isika amin'ny serivisy sy ny fomba fanaovan-tsika izay manatanteraka MySQL.
# serivisy serivisy apache2 # fijanonan'ny serivisy nginx # serivisy serivisy serivisy
Amin'ity tranga ity dia ajanontsika ny Apache na NGinx arakaraka izay ampiasaintsika, ary mazava ho azy koa dia atsahako ny MySQL.
Taty aoriana dia manao backup amin'ny database MySQL izahay:
Ary esorinay ny fonosana rehetra mifandraika amin'ny MySQL:
Ankehitriny dia tsy maintsy mametraka an'i Maria DB isika. Mampalahelo fa mbola tsy ao amin'ny repositories an'i Debian izy io, saingy azontsika atao ny mametraka azy io amin'ny alàlan'ny fitoerany manokana. Ho an'ny fizarana hafa, azonao jerena ny torolalana eto.
Izahay dia manampy an'ity manaraka ity ao amin'ny rakitra /etc/source.list:
Lisitra repository # MariaDB 5.5 - noforonina 2013-08-02 13:48 UTC # http://mariadb.org/mariadb/repositories/ deb http://ftp.osuosl.org/pub/mariadb/repo/5.5/debian wheezy main deb-src http://ftp.osuosl.org/pub/mariadb/repo/5.5/debian wheezy main
Avy eo manavao sy mametraka an'i Maria DB izahay:
sudo aptitude fanavaozana sudo apt-mahazo mametraka mariadb-server
Manomboka an'i Maria DB izahay (raha tsy nanao azy io ho azy) ary manamarina raha mandeha izy:
# mysql -u root -p -Be 'asehoy ny data' Ampidiro ny teny miafina:
Ny toe-javatra sasany dia niova be teo anelanelan'ny MySQL sy MariaDB, saingy mora be ny miasa. Saika ny zava-drehetra niova dia misy ifandraisany amin'ireo mekanika nosoloina, ohatra, ny replication. Tsy mila maka tahaka ireo safidy fanatsarana fampisehoana azontsika tao anaty fisie izahay my.cnf de MySQL, ary avereno am-pelatanana ny ambiny.
Ohatra, ireto data ireto:
Manao ny fanovana ilaina izahay ary mamerina an'i Maria DB.
# serivisy serivisy serivisy servicier # Mijanona mpizara tahiry MariaDB: MySQL. Manomboka ny mpizara tahiry MariaDB: MySQL. . . Manamarina ny kolikoly, tsy mikatona madio ary manatsara ny latabatra ilaina .. # MySQL -u root -p -Be 'asehoy ny data'
raha toa, Maria DB tazomy ilay anaran'ny mysql mitovy hanombohana indray ny serivisy, mba hitazomana ny fifanarahana tsara kokoa. Raha milamina ny zava-drehetra dia manomboka ny serivisy sisa izahay:
# serivisy apache2 serivisy # fanombohana serivisy nginx
Ary vonona. Raha te hiverina (izay tsy amporisihiko) isika dia mila mihazakazaka fotsiny:
# serivisy serivisy serivisy # serivisy apetraka-manala mariadb-server-5.5 mariadb-client mariadb-client-5.5 libmariadbclient18 # apt-get install MySQL-Server
Loharano: Lahatsoratra nalaina sy novaina tao amin'ny BeginLinux
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » MySQL mankany Maria DB: Torolàlana momba ny fifindra-monina haingana ho an'i Debian
Satria tsy hita ny enta-mavesatra nomaniny ho solon'izay.
Mieritreritra aho fa tsy voatery, fa misaotra tamin'ny fanazavana. Izahay dia nanao ny backup raha toa ka tsy mahomby ny Database ankehitriny, satria amiko dia samy mampiasa DB iray ihany. Tsy maintsy mamaky bebe kokoa momba an'io lohahevitra io aho.
Ny Fedora 19 dia efa tonga miaraka amin'i Maria amin'ny alàlan'ny toerana misy anao, saingy na fohy na kamo aza tsy nifindra monina ny tranokala ho any PostgreSQL, satria ny MySQL dia namely anay ny tandroka, manantena aho fa hijanona mahatoky mandritra ny 2-3 taona farafaharatsiny ny PostgreSQL.
Ahitana an'i Maria DB 😀 ihany koa ny ArchLinux
Manana Arch vice ianao ... Na dia manana nify malalaka aza aho ary te hampiasa azy io indray ... fa kamo kosa aho. 😀
Mahita fironana misy ny rafitra aho, anisan'izany ny fanohanana an'i MariaDB ary raha ny zavatra novakiako dia toa teo amin'ny ambaratongan'ny MySQL izy ary nihoatra izany aza tamin'ny lafiny sasany, saingy ny fanontaniako dia: ny zava-misy fa i Oracle ankehitriny ao ambadiky ny MySQL hifindra monina ary Ka amin'ny fomba fandaozana ny mpitantana bd efa voasedra ara-potoana sy an-tapitrisany?
Marina ny anao. Ny fitenenana Oracle fotsiny dia antony ampy hahatonga ny MySQL. Ary koa, Maria DB dia fork an'ny MySQL notazonin'ny mpamorona ny MySQL sy ny Community. Tsy haiko ny momba anao, fa farafaharatsiny manome fiarovana ahy izany. Ary raha manampy an'izany isika dia tena tsara ny mifanentana, satria heveriko fa tsy misy fialan-tsiny hifindrana amin'i Maria DB.
Ary izany no mahatonga ahy mandà ny hametraka Java amin'ny Debian-ko. Tsy dia mampiasa OpenJDK miaraka amin'ny IcedTea aho ary mahavariana izany ary tsara kokoa noho Java.
Lehilahy, azoko antoka fa tsy maintsy manana ny anton'ny fankahalanao an'i Oracle ianao (fofona izay mankahala an'i Microsoft, Apple ary Google aza) fa satria tsy nanao na inona na inona tamiko ny Oracle ... ary heveriko fa izaho dia hanome SPARC anao noho ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao XD
Manondro ny haavon'ny lozisialy fa tsy ny haavon'ny fitaovana.
Tsia, raha mankahala isika, dia halantsika ny zava-drehetra, tsy dia milay ny refy antsasaky ... hehehehehehe
Misaotra elav, raha ny tokony ho izy, torohevitra ve ny hanana roa mpizara tranonkala ary manomboka miaraka?
Ny olona sasany dia mampiasa Apache ho toy ny mpizara tranonkala ary NGnix ho mpisolo toerana ny fangatahana tranonkala. Tena korontana. Ohatra rehefa mampiasa Node.js, izay mampiasa seranana avy any aoriana izay tsy misy mampiasa ary angamba ny ISP anao no nanakana azy 😀
Mpampianatra mpifindra monina tsara. Ary koa, Slackware taloha nifindra tany MariaDB mba hisorohana ny fikorontanana bebe kokoa amin'ny MySQL.
Raha vantany vao eo amin'ny repo fiarovana ny seranam-piaramanidina Debian aho dia holazaiko faran'izay haingana. Amin'izao fotoana izao dia apetrako ny tutorial momba ny fametrahana / configuring / fanaingoana ny Slackware.
Saingy mbola miankina amin'ny mysql (amin'ny debian) ve ny kde sa miaraka amin'ity fifindra-monina ity dia tsy ilaina intsony?
brunocascio dia hoy izy:
Ka raha ny zavatra azoko dia tsy mila mamerina manamboatra na inona na inona momba azy ny rindranasa rehetra namboarina niaraka tamin'ny MySQL? Mametraka fotsiny MariaDB (ary esory ny MySQL) ary tazomy ireo anarana ho toy ny MySQL tokony handeha?
Mikasika ny zava-bita dia voalaza ny fanovana maotera.
Mahavita miavaka amin'ny MylSam sy InnoDB taloha ve izy ireo?
Nisy olona nanao metrika?
Mamaly an'i brunocascio
Azoko tsara haha, Misaotra!
Misaotra betsaka! raha mazava amiko izany; D
Tsy afaka nametraka teny miafina ho an'ny mpampiasa "root" MariaDB
│ Nisy lesoka teo am-pametrahana ny teny miafin'ny MariaDB │
│ mpampiasa fitantanan-draharaha. Mety hitranga izany satria ny kaonty efa │
│ dia manana tenimiafina, na noho ny olana amin'ny fifandraisana amin'ny MariaDB │
. Mpizara. │
│ Tokony hojerenao ny teny miafin'ny kaonty aorian'ny fametrahana ny fonosana. │
│ Azafady vakio ny fisie /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/README.Debian │
│ raha mila fanazavana fanampiny.
Nesoriko ny fonosana mariadb maridb-server
Nesoriko ny lahatahiry / var / lib / MySQL.
3 Nametraka indray ny fonosana Mariadb, Mariadb-server.
systemct manomboka mariadb; systemctl mamela mariadb (voavaha ny olana).
Manatsarana tanana ny Wordpress 3.6 nefa tsy maty mandritra ny fanandramana